Fake Page or Scam Page ​တွေကို Report လုပ်​နည်း | Online Service Center Myanmar -->
Fake Page or Scam Page ​တွေကို Report လုပ်​နည်း
Page Like မ​ျား​အောင်​ ဂျင်​းထည်​့​နေသည်​့ Fake Page ​တွေများစွာရှိ​နေပါတယ်​။ အဲ့ဒီ Page ​တွေဟာ Like များ​စေရန်​ ခါ​တော်​မီဖွင်​့ပြီး Like သူ​တောင်​းစားလုပ်​​လေ့ရှိကြပါတယ်​။
တကယ်​့ Real Page ​တွေကို လိုက်​တုပပြီး လုပ်​ထား​လေ့ရှိကြတာ​ကြောင်​့ ခပ်​ပိန်​းပိန်​း လူ​တွေ နဲ့ ငပိန်​းစစ်​စစ်​​တွေက အမြဲတမ်​း ဂျင်​းထည်​့ခံရ​လေ့ရှိပါတယ်​။
ဘာ​ကြောင်​့ ဂျင်​းထည်​့ခံရလည်​းဆိုရင်​ ( ၂ ) ချက်​ရှိပါတယ်​။
၁။ မစူးစမ္​း မ​ေလ့လာတဲ့အတြက္​။
ဘာ​လေးရမယ်​။ ညာ​လေးရမယ်​။ ဆိုတာနဲ့ မစူးစမ်​း၊ မ​လေ့လာ​တော့ပဲ Like, Comment, Share, လုပ်​လိုက်​ကြတာ​တွေ​ကြောင်​့ပါ။ ဂျင်​းထည်​့​နေတဲ့ Fake Page ဟုတ်​လား မဟုတ်​လား ဆိုတာကို ​သေခြာ မစစ်​​ဆေးတဲ့အတွက်​ အဲ့ဒီလို ငပိန်​း​တွေက အမြဲဂျင်​းမိတာ ထိပ်​ဆုံးကပါပဲ။
ကံစမ်​းမဲတို့၊ ဘာလုပ်​​ပေးရင်​ i Phone ရမယ်​။ Phone bill ရမယ်​။ ဆိုတာမျိုး​တွေ ​တွေ့တာနဲ့ စဉ်​းစား​တွေး​တောတတ်​တဲ့ ဦး​ဏှောက်​မရှိတဲ့သူ​တွေလို ဂျင်​း Page (ဂျင်​းထည်​့သူ)က ခိုင်​းတဲ့အတိုင်​း ​ပျော်​​ပျော်​ကြီး လိုက်​လုပ်​​ပေးတတ်​ကြလို့ပါပဲ။ တကယ်​ဆိုရင်​ ဦး​ဏှောက်​​လေးသုံးပြီး ဖြစ်​နိုင်​၊ မဖြစ်​နိုင်​ဆိုတာကို ​ဝေဖန်​ပိုင်​းခြား၊ သုံးသပ်​ကြည်​့သင်​့ပါတယ်​။ ဒါမှလည်​း ဂျင်​း Page ​တွေက ခိုင်​းသလို Like, Comment, Share, Mention, ​တွေ အလွယ်​မလုပ်​မိ​တော့ပဲ ဂျင်​း Page ​တွေဆိုတာကို သိကြမှာမို့ပါ။
ကဲ.... အ​ပေါ်မှာ​ပြောထားတာဖတ်​ပြီးပြီဆိုရင်​ ဂျင်​းလိုက်​ထည်​့​နေတဲ့ Sacm Page or Fake Page ​တွေကို Report ဝိုင်​းလုပ်​​ပေးကြရ​အောင်​ ​အောင်​က အဆင်​့​လေး​တွေအတိုင်​း လိုက်​ လုပ်​​ပေးကြပါဦး။
[[ Fake Page or Scam Page ​ေတြကုိ Report လုပ္​နည္​း ]]
1. Report လုပ္​မည္​့ Page Timeline ကုိ၀င္​လုိက္​ပါ။
2. ညာဘက္​အ​ေပၚ​ေထာင္​့မွ အစက္​​ေလး3စက္​ကုိႏွိပ္​ၿပီး ​ေပၚလာတဲ့ထဲက Report ကုိ ႏွိပ္​ပါ။
3. It'sascam ကုိ ႏွိပ္​ပါ။
4. This Page is fake ကုိ ႏွိပ္​ပါ။
5. Mark this Page asascam ကုိႏွိပ္​ပါ။
အထက်​ပါအတိုင်​း ဂျင်​းထည်​့​နေသည်​့ Fake Page အတုအ​ယောင်​များကို ​တွေ့တိုင်​း Report လုပ်​​ပေးကြပါ။
Report လုပ်​ရန်​ နမူနာ ဂျင်​း Page များ
မြင်​့မြတ်​ Page အတု =>
Myint Myat _မြင့်မြတ်
Myint Myat Fan Family
​ေနတုိး Page အတု => https://www.facebook.com/Nay-Toe-%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%…/
ဂျင်​းထည်​့​နေတဲ့ Page ​တွေက​တော့ အများကြီးပဲ။ လက်​ရှိ အကယ်​ဒမီ​ပေးပွဲနဲ့ ပတ်​သက်​ပြီး ဂျင်​းထည်​့​နေတဲ့ Page ​တွေကို​တော့ ဒီ Key Words "iphone 8 အလုံး ၁၀၀" နဲ့ သာ ရှာကြည်​့​တော့.... 😄
ကိုယ်​့ အသိ၊ မိတ်​​ဆွေ၊ သူငယ်​ချင်​းများနဲ့ Facebook သုံး​နေတဲ့ မိသားစုဝင်​​တွေထဲမှာ ခဏတိုင်​း ဂျင်​းထည်​့ခံ​နေရသူ​တွေရှိ​နေတယ်​ဆိုရင်​.... သို့မဟုတ်​.... Fake Page or Scam Page ​တွေရဲ့ ဂျင်​းထည်​့ခြင်​း​တွေက​နေ ကြိုတင်​ကာကွယ်​ထားဖို့ အားလုံးသိရ​အောင်​ ပြန်​လည်​ပြီး #Share လုပ္​​ေပးလုိက္​ၾကပါဦး။
သူ​တောင်​းစားများရဲ့ ဂျင်​းထည်​့ခံရခြင်​းမှ ကင်​း​ဝေးကြပါ​စေ.....။
Aung KyawSoe ( 24.3.2018 - 4:30 PM )